Solombavambahoaka MAPAR : Tsy menatra ny hanakorontana sahady -
AccueilSongandinaSolombavambahoaka MAPAR : Tsy menatra ny hanakorontana sahady
Solombavambahoaka MAPAR : Tsy menatra ny hanakorontana sahady
Araka ny voalazan’ny lahadinika izay tokony hotanterahina omaly teny amin’ ny lapan’ny Antenimieram-pirenena, dia nisy ny fiantsoan’ izy ireo ministry ny Atitany , izany hoe ny Praiminisitra lehiben’ ny governemanta sy ny minisitry ny Fitsarana. Na eo aza anefa izay voafaritry ny lahadinika izay dia tonga nanotrona ny fiantsoana ireo ny minisitry sasany anatin’ny governemanta. Io fahatongavana io rahateo no tsy neken’ny solombavambahoaka Mapar sy ny TIM, satria ho azy ireo dia tsy misy ilaina ny hafa, satria tsy voafaritra anaty lahadinika ny fahatongavan’ireo minisitra hafa. Io no nitarihan’ ireto solombavambahoaka sasany ireto ny korontana teny amin’ ny Antenimieram-pirenena, ary ny an’ny hafa aza dia tonga hatramin’ny fanambaniana ny mpanao gazety, izay manao ny asany teny an-toerana. Nandritra izany moa dia nisy ny tsangan-tanana, ary lanin’ ny besinimaro fa mijanona avokoa ny minisitra izay tonga teny an-toerana, ary mivoaka kosa ny mpanao gazety aminy maha fivoriana mikaton-trano azy. Ny mpanao gazety tonga teny an-toerana moa dia nanaiky ny fandaminana izay napetraky ny tompon’andraikitra, saingy noho ny fitohizan’ny resaka kosa, izay mbola tsy nisy tapaka satria dia mbola nandeha ny resaka hatramin’ny nanasiana fiantohana ny fivoriana.
Tsapa nandritra ity fotoam-pivoriana ity fa misy efa havanana amin’ny fanakorontanana ireo solombavambahoaka sasany, indrindra raha fifidianana no resahina, satria tian’ izy ireo ampisehoana angamba hoe tsy milamina ny fifidianana manomboka aty amin’ny lalàna hifehy azy. Ny zava-nisy anefa dia filam-baniny sy alako bika tsy tiako tarehy fotsiny, satria azo atao tsara ny nifandamina ary ny tsangan-tanana dia efa nandany fa mijanona afaka manatrika ny minisitra hafa amin’ny maha Antenimiera azy dia tokony heken’ ny rehetra izany. Marihna rahateo fa samy eo anivon’ny mpanatanteraka no tonga tany an-toerana, ka azon’ireo solombavam-bahoaka atao tsara ny tsy manotany izay tsy nasaina fa tsy nitarika savorovoro tahaka ireny zava-nitranga teny amin’ny antenimieram-pirenena ireny. Manoloana ireny fihetsika ireny aza dia nisy mihitsy ny solombavam-bahoaka sahy nilaza fa “inian’ ireo olomboafidy korontanina dieny izao ve ny fifidianana” hoy io solombavambahoaka io. Tsy izany ihany anefa fa sahin’ity solombavam-bahoaka ity mihitsy ny nilaza fa fitaratra ratsy no nasehon’ny solombavambahoaka sasany. “ Mampianatra lesona ratsy ho an’ ny vahoaka, ny fihetsika ratsy izay nasehon’ny solombavambahoaka”. Manoloana ireny zava- nitranga ireny dia anjaran’ ny Malagasy any amin’ ny distrika misy azy izany no mijery raha toa mbola averina na tsy amin’ ny toerany intsony ireny solombavam-bahoaka mpanakorontana henatry ny firenena ireny.